दाहसंस्कार गर्नै लाग्दा महिला ब्युँतिएपछि…! - Bidur Khabar
दाहसंस्कार गर्नै लाग्दा महिला ब्युँतिएपछि…!
विदुर खबर २०७६ साउन ८ गते ८:०७
पाल्पाको रैनादवी छहरा गाउँपालिकामा एक महिलाको जीवनमा चमत्कारिक घटना भयो ।
रैनादवी छहरा गाउँपालिका–१ सिद्धेश्वरकी ३७ वर्षीया नर्मदा ज्ञवाली कालीगण्डकीको रिडीस्थित आर्यघाटबाटै ब्युँतिएपछि मलामी समेत दंग भए । ज्ञवालीको अन्तिम अवस्था ठानेर परिवारका सदस्य र आफन्तले कालीगण्डकीको रिडी घाटमा अर्घ्यजलका लागि पुर्‍याएका थिए ।